Mara ihe zuru oke iji chọta azịza ya | Martech Zone
Fraịde, Septemba 11, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N'izu a, ezitere m otu tweet na-akwalite ngwaahịa dị mma. Ngwa a bụ ihe bara uru ma bara uru nke ukwuu ... mana enweghị m ike ịchọpụta ihe ọ bụ mere or otú iji ya na-enweghị ọtụtụ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ weghachite ozugbo na interface ahụ "dị mfe". M zara, "daalụ!". Agaghị m arụrịta ụka banyere arụmụka ha. Ha doro anya na ha nwere ọtụtụ amamihe karịa onye ọrụ ha… a seasoned techy and geek.
Nwere ike iduga ịnyịnya na mmiri, mana ị nweghị ike ị itụ ya.
N'ezie, interface dị mfe ha. Ha wuru ya! Ngwa a na-ekwu maka ya adịla n'ahịa, agbanweghị agbanwe, maka obere oge na nnabata nwayọ nwayọ. Hmmm… ya mere, anyị enwebeghị nnabata ngwangwa ma anyị enwetala nzaghachi na interface anyị dị mma. Ikekwe ha abụọ nwere njikọ?
Odighi ezi nma ikpari onye oru site n’iche na ha dara ogbi. N'ikwu ya n'ụzọ dị mkpirikpi, ị ga-eche mgbe niile na ha dara ogbi! Anaghị m ekwu na ndị ọrụ niile dara ogbi… naanị ịtọ ntọala 'uche' mgbe ị na-eche maka ahụmịhe ndị ahịa gị.
Na m mkparịta ụka ya na Clint Page, ọ na-ekwu okwu banyere mgbasa ozi ọha na eze dị ka akụ dị egwu nke ozi ndị ahịa - ịchekwaa ụlọ ọrụ ego na oge na nyocha, otu ndị na-elekwasị anya, na atụmatụ. Ya ahịa dị ka ngwaahịa, na ha maara ihe dị ha mkpa iji mee ka ndụ ha dịkwuo mfe… yana Dotster ihe ịga nke ọma. Dotster ama enịm itiat idakisọn̄ man ọtọn̄ọ ndikpan̄ utọn̄ nnọ mmọ!
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ, mkparịta ụka ahụ na-eme ugbua gbasara ngwaahịa gị! You nwere ike ịchọ Twitter, nwalee a Ibe akwukwo na Facebook, iji Alerts Google ma ọ bụ nanị biputere a blog post na ịrịọ nzaghachi. Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị mara na ị na-ege ntị, ha ga-enye gị azịza ịchọrọ. Naanị ị ga-ama ihe iji chọta azịza ya.
Sep 11, 2009 na 4:48 PM
Cheedị echiche, nwoke a bụ otu nchọpụta dị mfe na-enweghị ike izu ike. Ndị na-eme okpu kwesịrị ichegharị na interface chapeau.
Sep 12, 2009 na 4:14 PM
Newsflash na ndị mmepe sọftụwia. N'agbanyeghị etu sọftụwia gị si dị mma ma ọ bụ maa mma, ọ bụrụ na m ga-eji ihe karịrị 60 sekọnd anwa ịchọpụta etu esi eme ihe, ewepụrụ m ya.
Sep 14, 2009 na 6:54 PM
Nnukwu post Doug, enweghị ike ikwenye karịa gị!